ग्रीष्म २०१ 2015, मोन्टेनेग्रोमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू यात्रा समाचार
ग्रीष्म २०१ 2015, मोन्टेनेग्रोमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
समुद्र तट र रिसोर्टहरू | | मोन्टेनेग्रो, समुद्र तटहरू
बर्लिन पर्खालको पतन र पूर्वी यूरोपको पुन: कन्फिगरेशन पछि, नयाँ पर्यटन स्थलहरू नक्शामा देखा पर्‍यो। र के गन्तव्यहरू! उदाहरणको लागि, बाल्कन एक सुन्दर भूमि हो, अविश्वसनीय परिदृश्यहरू, अद्भुत मानिसहरू, संस्कृति, पुरातत्व र सपना समुद्र तटहरू सहित।
आज बाल्कनका सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरू मोन्टेनेग्रो हो। केहि समयको लागि त्यहाँ यूरोपीय राजधानी र यो सानो बाल्कन देशहरू बीच अधिक सीधा उडानहरू छन्, र पनि, एक पटक भित्र, राष्ट्रिय एयरलाइनले सयौं पर्यटकहरूलाई मुख्य गन्तव्यहरू जस्तै स्वेटे स्टेफन, पेट्रोभ्याक, बुड्वा वा बेकी, मा ल्याउँदछ। । एक दशकमा, मोन्टेनेग्रोले आफूलाई एक विशेष पर्यटक गन्तव्यको रूपमा पुन: कन्फिगर गरेको छ, विशेष गरी यसको समुद्री तटहरूका लागि।
El मोन्टेनेग्रोमा गर्मी swims सूट संग पर्यायवाची छ, र कि अपवाद को सबै भन्दा मोन्टेनेग्रो समुद्र तटहरू उनीहरूसँग ढुocks्गा वा चट्टानहरू छन्, तर तिनीहरूको सुन्दरता असुविधा भन्दा बढि छ। को बीच स्वेती स्टेफन यो सब भन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो, यो सत्य हो। यो आइकनिक साइट हो, रातो टाईलसहित मध्यकालीन शहर, क्रिस्टल सफा पानी, बालुवा। तसर्थ, धेरै व्यक्तिहरू। पेट्रोभ्याकअर्कोतर्फ, यो एक अधिक पारिवारिक मैत्री रिसोर्ट हो, खाडीमा केही चट्टान टापुहरूको साथ एक सुन्दर तटीय शहर, रातो र sa्ग र बालुवा र रेस्टुरेन्टहरूको भीडले आफैलाई घण्टा गुमाउन सक्छ।
Ulcinjसीमाको नजिक, केहि अर्को हो। यो निकटता नयाँ स्वाद र ध्वनी ल्याउँछ र अल्बानिया र कोसोभो बाट धेरै आगन्तुकहरु छन्। थप रूपमा, योसँग एक महान इस्लामिक संस्कृति छ त्यसैले बिकिनीहरू मस्जिद मीनारहरूको साथ रहनु पर्छ। अर्को तटीय शहर, धेरै सानो, छ गुलाफ। यो सहि लस्टिका प्रायद्वीपको टुप्पोमा छ र त्यहाँ धेरै पाहुनाहरू कहिल्यै हुँदैनन्। पानी धेरै स्पष्ट छ, लगभग समुद्री, र तपाईं पनि घाट वरिपरि गोता लगाउन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, त्यहाँ बालुवा समुद्र तट छैन, तर कंक्रीट प्लेटफार्महरू जुन सूर्य लाउन्जरहरू र ट्राम्पोलाइनहरू (फोटो) को रूपमा काम गर्दछन्।
समुद्र तट Prznoबुड्वाको साथ भ्रमित हुनु हुँदैन, यो कोटरको खाडी भन्दा पहिले खाडीमा अवस्थित छ, र मूलतः मोन्टेनेग्रिन्सले मात्र भ्रमण गर्दछ। पानी शान्त, कम, बालुवा सेतो र यसले धेरै परिवारलाई आकर्षित गर्दछ। त्यहाँ केही छाया, पिकनिक तालिका र एक रेस्टुरेन्ट छ। योसँग एक निश्चित उष्णकटिबंधीय हावा छ। अन्तमा, समुद्री तटमा छ Drobni Pijesak समुद्र तट, एक पृष्ठभूमि को रूप मा हिमाल संग। यो अधिक रबड छ, सेतो कंकड र किनारमा वन छ। यो हिँडेर पुग्न सकिन्छ किनभने यो मार्गबाट ​​टाढा छ, जसले अन्तमा यसलाई सुरक्षित गर्दछ।
यी मात्र होइनन् मोन्टेनेग्रो समुद्र तटहरू तर पक्कै पनि हामी तिनीहरूलाई सबैभन्दा सुन्दर मध्ये गणना गर्न सक्छौं। यसको लागि तिनीहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस् ग्रीष्मकालीन 2015.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » मोन्टेनेग्रो » ग्रीष्म २०१ 2015, मोन्टेनेग्रोमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
निलो झण्डा समुद्री किनारमा जानकारी (II)